Jurgen Klopp oo ka jawaabay hadalkii Guardiola ee ahaa inuu xiddigahiisa muhiimka ah nasin doono kulanka Chelsea – Gool FM
Jurgen Klopp oo ka jawaabay hadalkii Guardiola ee ahaa inuu xiddigahiisa muhiimka ah nasin doono kulanka Chelsea
(Liverpool) 25 Juun 2020. Waxaa caawa wada ciyaari doona kooxaha Chelsea iyo Manchester City, ciyaar micno gaar ah ugu fadhisa kooxda Liverpool, maadaama ay sugeyso inay City guuldarreysato si ay Reds u hanato horyaalka Premier League.
Macallinka Man City ee Pep Guardiola ayaa horraan carrabka ku dhuftay inuusan ciyaarsiin doonin xiddigahiisa muhiimka ah kulanka ay Stamford Bridge u safraayaan caawa kaddib guushii ay Liverpool xalay ka gaartay Crystal Palace ciyaar ku soo idlaatay 4-0.
Tababaraha isbaanishka ah ayaa sheegay inuu diiradda saarayo kulanka FA Cup-ka ee ay la ciyaarayaan Newcastle United si uu sanad ciyaareed kale u difaacdo koobka ugu cimriga dheer England.
Jurgen Klopp oo hoggaamiya Liverpool ayaa Guardiola ku tilmaamay nin ku wanaagsan khamaarka, isagoo ka jawaabayay hadalka dhiggiisa ee ahaa inuusan ahmiyad badan siineyn ciyaarta Chelsea, taasoo dhinaca kale go’aamin karta inay hoggaamiyaasha Premier League ay noqdaan guuleystayaasha xilli ciyaareedkan.
Balse Klopp wali kama dhaadhicin in tababaraha City uu doorashada safkiisa kulanka uu wajahayo Blues ugu roonaanayo Liverpool iyo si ay horyaalka ku guuleysigiisa isla caawa u xaqiijiso.
“Pep wuxuu ku fiicnaa inuu ciyaaro khamaarka” ayuu yiri Jurgen Klopp oo ka jawaab celinayay hadalkii Guardiola ee ahaa inuu nasin doono xiddigahiisa muhiimka ah.
“Waan daawan doonaa ciyaarta, balse uma daawanayo inay horyaalka ku xaqiijinno ee waxaan u daawanayaa inaan City la ciyaareyno kulanka xiga, si la mid ah Chelsea” ayuu sheegay macallinka Jarmalka ah isagoo qoslaya.
“Ma qorsheyneyno dabaal-dag ama wax kale, waxay dhici doontaa marka ay dhacdo.” ayuu hadalkiisa ku soo koobay Klopp.
Tababarihii hore ee Borussia Dortmund ayaa dhanka kale ammaan ballaaran ugu qubeeyay xiddigahiisa kaddib guushii ay xalay garoonkooda Anfield kaga gaareen kooxda Crystal Palace, isagoo ku tilmaamay inay soo bandhigeen qaab ciyaareed cajiib ah, jawigana ay ka dhigeen sida inay taageerayaal joogaan oo kale.
Sawirka Hoggaamiyihii Al Qaacidda ee Osama Bin Laden oo ka soo muuqday mid ka mid ah garoomada ugu caansan dalka Ingiriiska!!